GarsoorNews - Prof: Saciid Ciise “Xadgudubka iyo gaboodfalka loo geysto mucaaradka siyaasadeed
by Farah C/laahi | Sunday, Dec 24, 2017 | 64 views
Xadgudubka iyo gaboodfalka loo geysto mucaaradka siyaasadeed wuxuu ka turjumaya naceyb loo qabo dowlad wanaaga iyo dhaqan muujinaya kelitalisnimo.
Falalka nuucaasa waa mid saameeyntiisu ay gaarsiisan tahay xadgudub wadareed. Jawaabta ay leedahayna waa in si wadara looga soo horjeesto hogaanka inta aysan ku sii fogaan dhibaateynta bulshooyinka diidan taloxumada dalka lagu hogaaminayo. shaleyto ma leh wixii laga soo gudbey, laakiin waxaa wax ka qabad u baahan waxyeelada ay dowladdu kula kaceyso rayidka diidan habdhaqanka hogaanxumada dalka horusocodkiisa ku guuldareystay.
Dadka aaminsan dowladda in la siiyo talo ama la toosiyo waa dad dhaqanka dowladnimada si qaldan u taageersan, maxaa yeelay dowladda madaxdeeda waxey meel walba ka buuxsatey lataliyeyaal dhan walba kala taliya, sidaas daradeed ma aha doorka mucaaradka inuu talo ku taakuleeyo madaxda dowladda ama si guulwadeysan uu u saxo qaladaadkooda.
Mucaaradku si adag ayuu dhinaca siyaasadda uga falcelinayaa dhagarta iyo guuldarrada hogaaminta dalka ka dhalata, mana jirto fursado la isugu saamaxayo labada dhinac oo xeer dhaqameed lagu xalin karo. Mucaaradka siyaasadeed waa sida miinada oo qofkii qalda ay ku qarxeyso.
Qofkii miino qalda ma leh fursad labaad oo uu mar kale ku qaldamo,waayo wuxuu ku tegey qaladka kowaad.
Dhaqanka wadaadadu iyo hogaamiye beeleedyadu waa mid aan la tilaabo qaadi karin siyaasad hufan oo u baahan qawaaninta u degsan dalka raadraacooda in lagu kala baxo, waxeyna la mid yihiin sida kansarka oo kale oo bilowgiisa laga ilduufo halistiisa, marka uu noqdo dilaa aan waxba laga qaban karina taldu ku dhamaato murugo tiiraanyo leh, sidaas ayuu suluxa wadaadada iyo qabiilku ugu soo dhamaada tacsi tiiraanyo leh.
Sidoo kale waxaa jira shaqsiyaad aan ahayn mucaarad ama muxaafad siyaasadeed oo heybad uu horay u helay uga xeeladeysta labada dhinac, kuwaas waxey la mid yihiin gabaldhaca ama waaberiga oo labaduba aan maalin iyo habeyn midna ahayn, wuxuuna dhaqankoodu maalaa markasta wixii dhacaya ama imanaya oo ay fikrad la’aan ku taageeran.
Waana koox ka halis badan muxaafadka iyo mucaaradka, kuwaas oo si mabda’ la’aana dhaqankii, diintii, siyaasadii ugu adeegsanaya wax kasta oo ay ku helayaan waraab iyo raashin aan dhaafsiisneyn dhunigooda.
Siyaasiga ahaa musharaxa madaxweyne mudane C/Raxmaan C/Shakuur Warsame waxaa lagu xadgudbey xoriyadiisa wadaninimo, fikirkiisa siyaasadeed, xuquuqdiisa rayidnimo, kuwaas oo dhamaanteed ka turjumaya waxyeelo loo wada geystey mucaardka ka soo horjeeda siyaasadxumada dowladda, waxkaqabadka waxyeeladaasna waxaa mudan baarlamaanku inuu tilaabo ka qaado madaxweynaha.
Sidoo kale waxaa siyaasigaas lagu qaaday dagaal hubeysan oo loogu geystey jirdil iyo dhaawac, waxaana la diley dadka ka shaqeynayey gurigiisa iyo xaruunta xisbiga uu madaxda ka yahay, waxaana si aan sharciga raacsaneyn loo qaatay dokumentiyadiisa iyo boob loo geystey hantidiisa.
Dhamaan waxyaabahaan waxey tilmaamayaan gaboodfal halisa oo xadgudub weyn ku ah xuquuqda rayidka iyo sharciyada dhowraya hantida sida gaarka ah loo leeyahay.
Dhibaatooyinkan waxey mudan yihiin in Musharaxa Madaxweyne ee Shakuur uu dacwad ka geeyo ICC madaxda sare ee dowlada dhexe si baaritaan xoog leh loogu sameeyo tacadiyada ka dhashay amarada ay bixiyeen oo ay ku bartilmaameysanayeen dhaca iyo dilka lagu aamusinayo siyaasiyiinta mucaaradka ah.
Kooxda Qiyaano Qaran dacwooyinka ka socon doona dhinaca gudaha iyo dibeda dhamaantood wuu wada saameyn doonaa cawaaqib xumadeedu. Waxaan rajeynayaa sanadka cusub in lagu kala bixi doono muranka siyaasadeed ee u dhexeeya mucaaradka iyo madaxweynaha ku fashilmay hogaaminta dalka.
Mucaaradku waxey ka dheregsan yihiin raisulwasaaruhu inuu yahay fuliye ku shaqeeya talada madaxweynaha, wuxuuna la mid yahay marwo wixii lagu shubto uun dhaleysa, laakiin madaxweynaha uu yahay curiyaha talooyinka lagu hogaaminayo xukuumada iyo guud ahaan dowladda dalka, sidaas daradeed ayey aafadu ka imaaneysa hogaanxumada madaxweynaha, taas oo aysan xal u noqon karin cirdeynta raisulwasaaraha ama isku shaandheyn lagu sameeyo golaha wasiirada.
Halganka mucaaradnimadu wuu soconaya inta ay ka jabayaan kooxda Qiyaano Qaran oo ay ka hor wareegayaan horjoogista shacabka ay qiyaameen maslaxadooda.